တရား ၀ င်မဟုတ်သည့် UPENN အဘိဓာန်သို့သင်၏တရားဝင်လမ်းညွှန် - နှုန်းထားများ
တရား ၀ င်မဟုတ်သည့် UPenn အဘိဓာန်သို့သင်၏တရားဝင်လမ်းညွှန်
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ငါတို့ရဲ့ပါမောက္ခများနားလည်သည်ဖြစ်စေ၊ မေးခွန်းမှာ - သင်ကဲ့သို့လုပ်ပါလက်ရှိသို့မဟုတ်အနာဂတ်ကျောင်းသားနားလည်ပြီလား
သငျသညျ Penn မှာကျောင်းသားဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်ဒီမှာသွားသူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။ ဒါဟာအရေးမကြီးပါဘူး - သင်ဆဲဒီလမ်းညွှန်အသုံးဝင်သောရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အခြားပြည်နယ်တစ်ခုမှပထမတန်းစားကျောင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ်မကြာမီဖြစ်လာပါက၊ရပြီဟိုမှာ။
အချို့အတွက်မူယင်းသည်ဂရုမစိုက်ထိုက်သောစကားလုံးများဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့တစ်တွေလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပါပဲ။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? ဤတွင်တရားဝင်မဟုတ်သော UPenn ဘန်းစကား၏တရားဝင်လမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။
A: စပိန်နှင့်အခြားဘာသာစကားများဖြင့် (ကချန်ပီယံဂိမ်း၌ရှိသကဲ့သို့) ခွက်များအတွက်စကားလုံး
UPenn ဘန်းစကား: တိုတောင်းသည် အဆိုပါ Copabanana အထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များ၌၊ သူတို့သည်တ ၀ က်သောဘာဂါများရပြီးတနင်္လာနေ့တွင်ဒေါ်လာ ၅ ဂန္ထဝင် margaritas ကိုမွန်းတည့်ချိန်မှည ၇ နာရီအထိမေ့သွားသည့်အခါတွင်ဖြစ်သည်။
UPenn ဘန်းစကား: Fling အတွင်းအတော်အတန်မကြာခဏထိုနေ့၏အလယ်တွင် (များသောအားဖြင့်အရက်တန်ချိန်များသောအားဖြင့်) ပါတီတစ်ခု
A: n ။ အားလုံးကောင်းသောစတိုးဆိုင်များရှိရာမြို့၏စီးပွားဖြစ်areaရိယာ
UPenn ဘန်းစကား: sororities နှင့်ရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထားကလပ်ငှားရမ်းခြင်းနှင့်သင်ကကျောင်းဝင်းပေါ်တွင်သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးရက်သတ္တပတ်၌အဘယျသို့ထွက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အကောင်းဆုံးပါတီများကျင်းပဘယ်မှာwhereရိယာ
A: n ။ ကြာရှည်မခံသောရင်ခုန်စရာစွန့်စားမှုသို့မဟုတ်ရိုင်းအပြုအမူ
UPenn ဘန်းစကား: Fling သည်နွေ ဦး ရာသီ၌ပွဲများနှင့်ပွဲတော်များပါဝင်သောပွဲများ၏နိဂုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်များသောအားဖြင့်ပွဲနေ့များနှင့်ညများ၌သင် Penn သို့ရောက်သည့်အတွက်ဝမ်းမြောက်မိကြောင်း
A: v ။ လက်ကမ်းကြော်ငြာများဖြန့်ဝေ
UPenn ဘန်းစကား: သင့်အားလက်ကမ်းကြော်ငြာများကိုကမ်းလှမ်းသောရန်လိုသူများ၏စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်လှုပ်ရှားမှု၊ ဖြစ်ရပ်များ၊ ပြသခြင်းများ၊ သို့မဟုတ်ဒေသခံ tour ည့်သည်များခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်မလိုလားသူများကိုဤလူများကသဘောကျမည်မဟုတ်ပါ
UPenn ဘန်းစကား: အတိုကောက်အတိုကောက်အတိုငျး တက္ကသိုလ်စီးတီးမှတဆင့် Loop - ကျောင်းပရဝုဏ်နှင့်နေရာ ၃၀ တွင်နေရာအနှံ့အပြားဖွင့်ထားသော UPenn ၏လွန်းသောဝန်ဆောင်မှုthကျောင်းသားများနှင့် ၀ န်ထမ်းများအတွက်အခမဲ့ဘူတာရုံ
A: မျက်နှာဖုံး - သင့်ကိုယ်ကိုအသွင်ပြောင်းရန်အတွက်သင်၏မျက်နှာပေါ်တွင်သင် ၀ တ်ထားသောအရာနှင့်ဆံပင်တု - သင်ကိုယ်တိုင်ဖုံးကွယ်ရန်သင် ၀ တ်ထားသောဆံပင်ကိုတုပခြင်း။
UPenn ဘန်းစကား: an All- အထီးဂီတဟာသကလပ် တိုင်းပြည်အတွင်းရှိသက်တမ်းအရင့်ဆုံးသောအမျိုးသားတစ် ဦး ဖြစ်သော Penn ရှိဂီတဟာသကလပ်တစ်ခုဖြစ်သည် ပန်းချီဆရာ
UPenn ဘန်းစကား: က ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုအဖွဲ့ Penn တွင်ကျောင်းသားကျောင်းဖွင့်လှစ်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းသည်ကျောင်းဝန်းရှိအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် MERTed ရယူခြင်းဆိုသည်မှာသင်သည်အရက်မူး၊ ဖျားနာခြင်းသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာများလွန်းခြင်းကြောင့် MERT အဖွဲ့သည်သင့်ကိုဂရုစိုက်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ သူတို့သည်သင့်အားဆေးရုံမတိုင်မီကုသမှုပေးပြီးသင့်အားဆေးရုံသို့ခေါ်ဆောင်သွားမည်။ အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်၊ ဒါကသင့်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဆေးဝါးကုသမှုကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။
ပုံမှန်အဓိပ္ပာယ် (UM): n ။ သူတို့ထုတ်လွှင့်တော့မယ့်အားကစားဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တီဗွီအစီအစဉ်တစ်ခု။
UPenn ဘန်းစကား: v ။ ပါတီတစ်ခုမတိုင်မီပါတီပွဲကြီးအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်နှင့်အဆင်သင့်နေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသောက်သုံးခြင်း။ အဆိုပါ pregame အဖြစ်အပျက်များသောအားဖြင့်အအေးဆုံး dude ရဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာကြာပါသည်။
A: n ။ အတွင်း၌အမျိုးမျိုးသောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူသင်၏ပါးစပ်၌အရည်ပျော်သောမုန့်နှင့်အတူမီးဖိုချောင်သုံး Goody
UPenn ဘန်းစကား: ဒါကအစာပဲဖြစ်ပေမယ့်မုန့်ဖုတ်မထားဘူး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ အသားနဲ့ခေါက်ဆွဲတွေပါတဲ့ creamy စွပ်ပြုတ်တစ်ခွက်နဲ့မတူဘူး။ သင်က Pennsylvania ပြည်နယ်မှမဟုတ်ဘဲသင်အိုးတလုံးလိုချင်လျှင်သင်နှင့်အတူစိတ်ပျက်မိလိမ့်မည်။
UPenn ဘန်းစကား: များအတွက်အတိုကောက်မြင်ပါ၊, ပထမ ဦး ဆုံး Street မှာထင်ရှား။ ,
A: n ။ သေးငယ်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခု?
UPenn ဘန်းစကား: မြင်ကွင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ကြွယ်ဝသောကျောင်းသားတစ် ဦး သည်မင်းတို့အားမြို့တွင်းပါတီပွဲများ၌သင်အမြဲတွေ့မြင်ရပြီး၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရာများကိုပြုလုပ်နေခြင်းကြောင့်သင်၏အာရုံကြောများပေါ်သို့သင်မမြင်နိုင်ပေ။
A: သင်တစ် ဦး ယင်ကောင်ကိုလိုက်ချင်သောအခါသင်လုပ်သောအသံများ - သီချင်းခေါင်းစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော Shoo Fly, ငါ့ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေပါနှင့်
UPenn ဘန်းစကား: ဒါကြောင့်လည်းလူသိများပါတယ် Shoofly Pie - သကာရည်နှင့်လုပ်သောအစဉ်အလာ Amish ပိုင်
A: v ။ or n ။ တက်ရောက်သူတတိယလူ - ဆေးလိပ်သို့မဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်နိုင်သည့်အခြားအရာတစ်ခုကိုခံစားခြင်း
UPenn ဘန်းစကား: Smokey Joe's, ကျောင်းသားများသည်အင်္ဂါနေ့နှင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များတွင်စိတ်အေးလက်အေးထိုင်ရန်အတွက်များသောအားဖြင့်မကြာခဏလာရောက်လေ့ရှိသည်
A: ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တစ်စုံတစ် ဦး ၏အမည် Urban အဘိဓါန်အဘိဓာန်ကိုသင်အသုံးအနှုန်းအတွက်ကောင်းတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေမြိုင်
UPenn ဘန်းစကား: Steiny-D သည် Steinberg-Dietrich ခန်းမ , Wharton ကျောင်းအတွက်သီးသန့်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်
A: n ။တစ်မြို့သို့မဟုတ်မြို့အတွက်အများပြည်သူလမ်း
UPenn ဘန်းစကား: တိုတောင်းသည် ၃။ thလမ်းမဂ္ဂဇင်း အတွက်ရရှိနိုင်မယ့်တစ်အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုမဂ္ဂဇင်းနေ့စဉ် Pennsylvanianကျောင်းသားများအတွက်ရုပ်ရှင်နှင့်အစားအစာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ အတင်းအဖျင်း၊ ဟာသနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများ
A: တစ်ခုခုအတွက်အတိုကောက် ...
UPenn ဘန်းစကား: ကောလိပ်ကျောင်းသားဖြစ်ရခြင်းကိုငြီးငွေ့နေသောသက်ကြီးရွယ်အိုမိန်းကလေးတစ်ယောက်သည်ပါတီပွဲများသို့မတက်တော့ဘဲပုံမှန်အားဖြင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုစိတ်မဝင်စားပါ။ အွန်လိုင်းစာတမ်းများကိုတည်းဖြတ် နှင့်သူမ၏ညနေခင်း SWUGs နှင့်အတူပျင်းခံရခြင်းသုံးစွဲသည်
UPenn ဘန်းစကား: တရားဝင်အမည်ဖြင့်ကျောင်းဝင်းရှိနောက်ထပ်မိုက်မဲပန်းပုဖြစ်သည် ပovenိညာဉ် ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင်တပ်ဆင်ခဲ့သောအနီရောင်ရုပ်ထုကြီးတစ်ခုသည်ကြီးမားပြီးအသုံးပြုသော tampons စုစုပေါင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော်လည်းကြည့်ရှုသူမှန်သည်။
A: n ။ သင့်ဘလောက်စ်သို့မဟုတ်အခြားအဝတ်အစားပေါ်ရှိ disk သေးသေးလေးတစ်ခု
UPenn ဘန်းစကား: ရန် ကျောင်းဝင်းအပေါ်ပန်းပု သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်တွေ့ဆုံရန်စီစဉ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာကြီးမားတဲ့အဖြူရောင်ခလုတ်ကို
A: ... အတိုကောက်တစ်ခု။
UPenn ဘန်းစကား: ကျောင်းသား -operated ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံ UPenn မှာ
UPenn သည်ဂျိုးဘိုင်ဒင်သင်ကြားပို့ချမည့်နေရာဖြစ်ပြီး၎င်းအချက်သည်သူ့ဟာသူအတွက်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံအတွင်းအအေးဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်က fit လိုချင်ရင်ဘန်းစကားအချို့ကိုပိုလေ့လာပါ။